Igumbi lokulala le-Puertomar 3 Apt. - 4 pp
Alicante / Alacant, i-Spain
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Realrent
Qasha ifulethi elinamagumbi okulala angu-3 e-Alicante elilala abantu abangu-4 elinemibhede ephindwe kabili e-master bedroom, kanye nombhede ongu-1 wegumbi lesibili nelesithathu. Wonke amafulethi ethu anendawo yekhishi ehlome ngokuphelele enezitsha ezanele, i-kitchenware kanye nemishini ukuze izivakashi zethu ziqedele ukuzimela ngamaholide azo.
Qasha ifulethi elinamagumbi okulala angu-3 e-Alicante elilala abantu abangu-4 elinemibhede ephindwe kabili e-master bedroom, kanye nombhede ongu-1 wegumbi lesibili nelesithathu. Wonke amafulethi ethu anendawo yekhishi ehlome ngokuphelele enezitsha ezanele, i-kitchenware kanye nemishini ukuze izivakashi zethu ziqedele ukuzimela ngamaholide azo. Futhi, izindlu zethu zonke zinezinhlelo zokupholisa umoya/zokushisisa, umabonakude kanye nokungena engadini yomphakathi kanye nedamu lokubhukuda).
Izindlu zethu zasePuertomar zisendaweni ekahle yedolobha kanye nekhefu lolwandle njengoba zingamamitha ayi-100 kuphela ukusuka esitolo esikhulu esiseduze kanye nezinsiza zasendaweni edolobheni lase-Alicante, futhi ziyi-1km kuphela ukusuka ogwini oluhle olunesihlabathi e-Alicante. Indawo ifinyeleleka kakhulu njengoba amafulethi angamamitha angama-300 kuphela ukusuka esiteshini samabhasi, i-2km ukusuka esiteshini sesitimela, kanye ne-10km ukusuka esikhumulweni sezindiza okuwenza alungele amaqembu asuka kuwo wonke amabanga.
Ubude: 38º 20' 15"
Ubude: 00º 30' 11"
***Uhlelo lokuqoqwa okubalulekile luqala ngo-16h00 kuya ku-19h00. Ngemva kuka-19h00 futhi kuze kube ngu-24h00, uzokhokhiswa u-20,00€. Ukungena akunakwenzeka ngemva kuka-24:00.
*Amafulethi awakwazi ukugcinelwa, amaphathi, nanoma yimuphi umcimbi.
**Idiphozithi engu-200€ izofakwa ezindaweni zokuhlala ezihlanganisa uSuku LukaNcibijane.
*I-REALRENT igodle ilungelo lokukhawulela noma ukukhawulela ukufinyelela / ukusetshenziswa kusuka echibini le-complex yokuhlala
Inombolo yepholisi: AT-440405-A
Hlola ezinye izinketho ezise- Alicante / Alacant namaphethelo